Nepal Dayari | हास्यटेलिश्रृंखला सक्कि गोनीमा किन देखिन छो’ डे अर्जुन घिमिरे ‘पाडे’ ? यस्तो छ वास्तविकता !
हास्यटेलिश्रृंखला सक्कि गोनीमा किन देखिन छो’ डे अर्जुन घिमिरे ‘पाडे’ ? यस्तो छ वास्तविकता !
भाद्र १२, २०७८ शनिबार १११२ पटक हेरिएको
‘कतै तपाईंहरूको सक्किगोनि पनि भित्रभित्रै त फु’टेको त हैन ? अर्जुन घिमिरे पाँडे नभएको सक्किगोनि पनि सक्किगोनिझैं भएको छ। हामीलाई पाँडे जसरी नि चाहियो।’‘पाँडे खोई चाइयो, नुनबिनाको तरकारीजस्तै भयो सक्किगोनि।’
उनले थपे— ‘ममी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्न तीन महिनादेखि ग्रिन सिटी अस्पतालमा संघर्षरत हुनुहुन्छ। भगवान् छन्, छैनन्, त्यो त थाहा भएन। यदि, छन् भने हाम्रो पुकार सुनेर आमालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिनोस्। हामी यही एउटा जी’वित आशा बोकेर उहाँलाई कुरिरहेका छौं।’नेपाल समाचारपत्र बाट